AYISUKUNYELWE EYEZOKUTHUTHA - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
EZIMBONINI ezimbalwa ezasungulwa nezilawulwa ngabantu abamnyama, eyamatekisi iyona enkulu kunazo zonke.
Ngokusho kweKhomishini yokuNcintisana le mboni esineminyaka ecela ku-50 iqashe abantu abawu-500 000 kanti kunabadayisi abawu-150 000 abaphila ngokudayisa emarenki amatekisi.
Emnothweni kuthiwa ingenisa imali ephakathi kukaR60 billion noR90bn ngonyaka kanti amatekisi abhalisiwe nasebenza ngokusemthethweni angaphezudlwana kuka-250 000.
La matekisi athutha abantu abawu-15 million ngosuku noma u-66.5% wabagibeli. Zonke lezi zibalo zisicacisa kahle isithombe sokuthi yimboni enkulu nemqoka kangakanani lena.
Iyingxenye yomgogodla womnotho ngoba inqwaba yezisebenzi ithembele ematekisini ukufika emsebenzini ngesikhathi mihla namalanga.
Amatekisi ahambela imizila eminingi kakhulu kunamabhasi nezitimela futhi wona atholakala usuku lonke emini, hhayi ngezikhathi ezithile kuphela.
Yingakho kudabukisa impela ukuqinisekiswa kokuthi le mboni ayixhaswa ngendlela okuxhaswa ngayo amabhasi nezitimela, ekubeni lezi zithuthi zithutha isibalo esincane. Umbiko weKhomishini yokuNcintisana, obesekuneminyaka emithathu iphenya imboni yokuthutha umphakathi, uveze ukuthi izitimela yizona ezihlomula ngezizumbulu zosizo lukahulumeni ekubeni kuyizona ezithutha abagibeli abancane, abawu-9.9%, bese kulandela amabhasi, athutha abantu abawu-23%.
Ikhalile ikhomishini ngalokuu, yathi kumele kulungiswe kube nendlela yokuxhasa le mboni ebhekelela wonke umuntu.
Ithe le ndlela okwenzeka ngayo iveza ukuthi uhulumeni ophethe njengamanje wathatha izintambo kuhulumeni wobandlululo wavele waqhubeka lapho ugcine khona, esikhundleni sokubuyekeza izinto.
Kade osomatekisi babekhala ngokungaphathwa ngendlela efanayo kwabantu abathutha umphakathi kodwa beshaywa indiva.
Njengoba izitimela kuyizona nje ezithola izigidi kuyadabukisa ukuthi loku kuyaqhubeka, yize kucaca ukuthi ziyehluleka njengoba kunanemizila esiyavalwa futhi imvamisa azifiki ngesikhathi nokunomphumela omubi kubagibeli abazisebenzisayo.
Abanye basuke sebethenge amathikithi esonto noma enyanga yonke, abagcina bengakwazi ukuwasebenzisa futhi bazithole sekufanele basebenzise enye imali ngoba sebezohamba ngezinye izinto zokuthutha.
Kuyiqiniso ukuthi zikhona izinto nayo imboni yamatekisi edinga ukuzilungisa kodwa loko akusho ukuthi kumele icwaswe ekubeni yenza umsebenzi omqoka kangaka ezweni.
Akekho ongazi ukuthi uma kuthiwa amatekisi atelekile ezweni lonke kuba nzima kanjani ukuthi abantu bafinyelele emsebenzini.
Akube neqiniso ngoba loko kuzosiza ukuthi le mboni iqhubeke nokwakha la mathuba emisebenzi ewakhile kodwa okumqoka wukuthi loku kungasiza nabagibeli; mhlawumbe kwehlise nemali yokugibela, okumanje imba eqolo.